Obi Ho Asɛm: Arthur Kuuku Emmanuel Lennox | Akan kasahorow
Wukuda. Ɛbɔ da 22, afe 2021
Anokwale by GhanaThink, Memeneda. Ɔgyefuo da 13, afe 2021 - Wukuda. Ɛbɔ da 1, afe 2021. 𓀠 423
Obi Ho Asɛm
Arthur Lennox ne awoda no yɛee Wukuda. Oforisuo da 25, afe 1979.
Ne mbaatan yɛee Arthur Alexander na Arthur Stella.
Ɔ nyaee nua-basia fɛwfɛw abiasa.
Ɔ yɛee banyin adwenemutew.
Lennox yɛee kwankyerɛnyi papa.
1999 mu, ɔ tuee kwan nye ne busua.
Lɛndɛn mu, ɔ hyɛee ase yɛ skuulwienyi.
Ɔ yɛee adwuma afe pii.
2009 mu, ɔ baee Gaana hɔ.
Arthur Lennox wuee Yawda. Ɔpɛnimba da 31, afe 2020 so.
#obi ho asɛm #awoda #Lennox #Arthur #ne #baatan #Alexander #Stella #ɔ #wɔ #abiasa #fɛwfɛw #nua-basia #adwenemutew #banyin #papa #kwankyerɛnyi #mu #1999 #tu kwan #nye #busua #Lɛndɛn #hyɛ ase yɛ #skuulwienyi #yɛ adwuma #pii #afe #2009 #ba #hɔ #Gaana #wu #so